च्याम्पियन्स लिगः रियल, बार्सा वा पीएसजी कसले उपाधि जित्ला ? – Vision Khabar
। २७ भाद्र २०७४, मंगलवार १७:५२ मा प्रकाशित
रियल मड्रिड लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने अभियानमा रहँदा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनले यसैका लागि कीर्तिमानी खर्च गरिरहेको छ । बार्सिलोना पनि आफ्ना गल्तीहरु सुधार्दै अघि बढ्दैछ ।
यसका साथै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ६ बेलायती क्लबहरुका साथ युरोपियन च्याम्पियन्स लिग मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ । अपेक्षा गरिएको छ कि यस सिजनको च्याम्पियन्स लिग अहिलेसम्मकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ ।
वास्तवमा सवाल के हो भने आफ्नो पहिलेको उपलब्धि जस्तै (१९५६ मा युरोपियन कपको सुरुवात भएपछि रियलले लगातार पाँच संस्करण जितेको थियो) रियलले यो समयमा पनि त्यस उपलब्धि दोहोर्‍याउन सक्ला ?
लामो सहयपछि सान्टियागो बर्नबाउमा यस्तो लागिरहेको छ कि सुपरस्टारहरु भविश्यका लागि योजना बनाइरहेका छन् ।
जिदानको कार्यकालको सफलता अहिलेसम्म केवल ट्रफीका आधारमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ । तर, यस तथ्यबाट पनि ग्यारेथ बेल (जिदान बेलका ठूला प्रशंसक हुन्) जस्ता सुपरस्टारले समेत टिममा आफ्नो भूमिकाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि पछिल्लो ६ महिनादेखि इस्कोले त्यही भूमिकामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो, टोनी क्रुज, लुका मोडि्रड, सर्जियो रामोसको शेषपछि इस्को, एसेन्सियो र अन्य स्टारहरु समेटेर टिम सेट गर्दैछन्, जसको भविश्य अहिले उज्वल देखिएको छ ।
नेइमार क्लबमा रहन चाहेनन्, त्यस्तै क्लब म्यानेजमेन्टले पनि विश्वास गुमाउन पुग्यो । लियोनल मेस्सीले अहिलेसम्म प्रस्तावित नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, अर्को समरमा उनको सम्झाैता सकिँदैछ । निक्कै दबावमा देखिएका क्लबका अध्यक्ष जोसेप बार्टोमेउले दाबी गरेका थिए कि आन्द्रेस इनिएष्टा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार थिए, तर महान मिडफिल्डरले सार्वजनिक रुपमै इन्कार गरे ।
बार्सिलोनाले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमण्डबाट ओस्मेन डेम्बेलेलाई भित्र्याएको छ, जसले नेइमारको स्थान लिनेछन् । आफ्ना पुस्ताका उत्कृष्ट प्रतिभाका रुपमा रहेका १९ वर्षे कीशोरलाई विश्व उत्कृष्ट खेलाडीको दावेदारको रुपमा लिइन्छ ।
बार्सिलोनाको डेप्थ स्ट्रेन्थमा कमी देखिएको छ । जस्तै सन् २०१५ को क्वाटरफाइनलमा पहिलो लिग मुस्किलले जितेपछि दोस्रो लिगमा पराजित हुनाको कारण थकान थियो । रियल एक कदम अघि देखिएको थियो त्यस बेला । यस सिजन च्याम्पियन्स लिगमा अर्नेष्टो भाल्भर्डेको टिमका लागि धेरै अगाडिसम्मको कल्पना गर्न कठिन देखिन्छ ।